Apple ကနယူးက iPhone အရှေ့တောင်ကြေညာခဲ့ပါတယ် - သတင်း Rule
Apple ကနယူးက iPhone အရှေ့တောင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်
ပြုပြင်မွမ်းမံ iPhone 5S ကို 2015 ခုနှစ်ရဲ့ iPhone 6S နှင့်အတူတန်းတူဖို့ကုမ္ပဏီ၏အသေးဆုံးဖုန်းကိုဖွင့်တတ်၏, သေးငယ်တဲ့ဖုန်းကိုလိုခငျြသောသူတို့အဘို့သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့စဉ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple က iPhone ကိုအရှေ့တောင်ကြေညာ: သေးငယ်တဲ့, စျေးနှုန်းချိုသာစမတ်ဖုန်း” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, The Guardian ကတနင်္လာနေ့က 21 မတ်လများအတွက် 2016 22.43 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple ကပိုကြီး-ဖြစ်ပါတယ်-ပိုကောင်းဖုန်းကိုလမ်းကြောင်းသစ် bucked နှင့်၎င်း၏ 4in iPhone 5S ကိုတစ်ဦးတွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ဗားရှင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်, သစ် iPhone ကိုအရှေ့တောင်.
ဒါဟာ Apple ရဲ့လက်ရှိထုတ်လုပ်နေပေမဲ့အတွက်အသေးဆုံးစမတ်ဖုန်းနှင့် iPhone ကတည်းက 4.7in ထက်သေးငယ်တဲ့ screen နဲ့လွှတ်ပေးခံရဖို့ပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်6စက်တင်ဘာလထဲမှာဖြန့်ချိခဲ့သည် 2014.
Greg Joswiak, Apple အတွက်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ VP, ကပြောပါတယ်: "တချို့လူရိုးရှင်းစွာသေးငယ်ဖုန်းများကိုချစ်. ထိုအခါ 4in ဖုန်းကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး iPhone ကိုဖြစ်ပါတယ်. အချို့လူများကမေးကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းပန်. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က iPhone အရှေ့တောင်ကတောင်းဆိုနေ. အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားအရှိဆုံး 4in ဖုန်းကို။ "
အဆိုပါ iPhone ကို SE - ဖြစ်နိုင်သည်ဟာ Macintosh အရှေ့တောင်ကွန်ပျူတာအားနာမ၌ပြန် harking, ရာဖြန့်ချိခဲ့သည် 1987 - 2013 ခုနှစ်ရဲ့ iPhone 5S မှအလားတူပုံစံကို-Factor ရှိပါတယ်. ဒါဟာသတ္တုကိုယ်ခန္ဓာရှိပါတယ်, 4မျက်နှာပြင်မှာ, ID ကိုလက်ဗွေစကင်နာများနှင့်တစ်ဦး flush ကင်မရာမှန်ဘီလူးထိ, Apple ရဲ့လတ်တလောအိုင်ဖုန်းနဲ့မတူပဲ. အဆိုပါဖုန်းကိုအနက်ရောင်နဲ့ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်, အဖြူ, ရွှေကိုရွှေနှင့်ထ.
ထိုကိရိယာ၏အပြင်ဘက်တစ်ဦးက iPhone 5S နဲ့ဆင်တူပေမယ့်အတွင်းက iPhone 6S ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်, Apple ရဲ့ A9 processor ကို အသုံးပြု., Apple Pay ကိုနှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန် 12-megapixel ကင်မရာများအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်တစ်ဦးမှာ NFC chip ကို, Apple ရဲ့နှင့်အညီ 2015 အိုင်ဖုန်း.
အဆိုပါ iPhone 5S ကို, အတွက်စတင် 2013. ဓါတ်ပုံ: Marcio ဟိုဆေး Sanchez / AP
အဆိုပါ iPhone ကိုအရှေ့တောင်နှစ်ဆ processing power နဲ့ iPhone 5S ကို၏လေးဆဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာကြာကြာဘက်ထရီသက်တမ်းအဖြစ်.
Apple ကသေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းဆဲတစ်ဦး iPhone ကို အသုံးပြု. သူတို့အားစည်းရုံးမည်ဟုမျှော်လင့် 5, 5S ကသို့မဟုတ် 5C, ဒါပေမဲ့သူကို၏အရွယ်အစား၏ပိုကြီးတဲ့ဖုန်းကိုမလိုချင်ကြဘူး 4.7iPhone ကို 6S အတွက် သို့မဟုတ် 5.56S Plus အားရှိ, အဆင့်မြှင့်တင်ရန်. Cook ကခန့်မှန်း 60% Apple ရဲ့သေးငယ်တဲ့အိုင်ဖုန်းကို အသုံးပြု. သူတို့၏အမျိုးအသေးတစ်ဦး iPhone ကိုမှအဆင့်မြှင့်ကြပြီမဟုတ်6သို့မဟုတ်အသစ်များ, ပုတ်ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အလားအလာဈေးကွက်လည်းမရှိအဓိပ်ပာယျ.
ပိုကြီးတဲ့စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်လူကြိုက်များထင်ရှားပြကြပြီနှင့်ထုတ်လုပ်သူများပိုကြီးဘက်ထရီကထောက်ခံပိုပြီး features တွေကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါပြီ, Apple ရဲ့ ၎င်း၏ 4.7in screen နဲ့ iPhone ကို အသေးဆုံးတဦးကျန်ရစ်သည်.
သေးငယ်တဲ့အဖြစ်, ပရီမီယံစမတ်ဖုန်း, သစ် iPhone ကိုအရှေ့တောင်ပြိုင်ဆိုင်မှု၏လမ်းအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်. သာ Sony ကသေးငယ်တဲ့ screen ကိုအတူကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်, နှင့် 4.6က Xperia Z5 ကို Compact အတွက်. Motorola ကဖွငျ့အခြားသေးငယ်ဖုန်းများ, HTC နှင့် Samsung ကဖြတ်-Down များမှာ, စျေးကွက်၏တစ်ဦးထက်ပိုစျေးသက်သာတဲ့အပိုင်းပစ်မှတ်ထားကြောင်းဆင်းရဲတဲ့ components နဲ့စျေးနှုန်းချိုသာဗားရှင်း.
Apple အတွက်, the iPhone SE representsaway to targetamore cost-sensitive market without stooping to budget levels. In the past the company has used older models of the iPhone, maintaining the 2012 iPhone 4S for sale until the release of the iPhone6တွင် 2014, and previous models before that. But selling older smartphones concurrently with new models has added to the company’s burden to maintain smartphone updates for longer, which it typically does for at least three years after release.
The iPhone SE will be released on 31 မတ်လ, with pre-orders starting 24 မတ်လ, costing from $399 in the US, or £359 in the UK, for 16GB of storage; $499 in the US, or £439 in the UK, with 64GB of storage.
အဘယ်သူမျှမ, quitting iPhone apps doesn’t help save battery, says Apple
29208	5 ပန်းသီး, အပိုဒ်, IOS ကို, iPhone ကို, iPhone 5s, အဓိကအပိုင်း, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← အဆိုပါစက်ရုပ်-အခြေခံပြီးလုပ်သားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Virtual Reality Porn လာသည် →